R/W Saacid oo loo qabtay in 2 maalin lagu horkeeno Baarlamanka. - Caasimada Online
Home Warar R/W Saacid oo loo qabtay in 2 maalin lagu horkeeno Baarlamanka.
R/W Saacid oo loo qabtay in 2 maalin lagu horkeeno Baarlamanka.
Kulankii maanta Baarlamanka Soomaaliya ay ku yeesheen Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay barlamanka ku jeex jeexeen Arimo badan oo ay ku jirtay Codsi Ra’iisul Wasaaraha loo jeediyay.
Kulan ay maanta ay ku yeesheen Barlamanka xaruntooda Magaalada Muqdisho waxaa ay uga hadleen Arimo dhowr ah waxaana ka mid ahaa Codsi ay u jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyada Soomaaliya kaas oo ah in uu Maalmood Gudahood baarlamaanka ku Hor keeno R/wasaaraha Cusub ee uu dhawaan Magacaabay.
Proff Jawaari oo ah Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka hor hadlayay Baarlamanka ayaa sheegay in ay ka dalbanayaan M/weynaha in uu barlamaanka horkeeno Cabdi faarax shirdoon si Cod loogu qaado iyadoona la arkayay Xildhibaanada qaar oo uu ka dhex taaagnaa Khilaaf la xiriira qaabka loo Marayo Ansixinta R/wasaaraha iyo waxa uu dastuurku ka qabo.
Baarlamanka ayaa sheegay inay Awood u leeyihiin in mudo kooban Ra’iisul Wasaaraha uu ku horyimaado baarlamanka.